Nokia Advertising ... Windows ekwentị Ọzọ | Martech Zone
Nokia Advertising… Windows ekwentị Ọzọ
Monday, October 31, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ma Nokia ma Microsoft enwechaghị ike na ahịa mkpanaka United States, ahịa nke iPhone na gam akporo na-achịkwa. Ndi mmadu ekwesighi iguta nhazi ma. Nke mbụ, Nokia na-achịkwa ahịa mba ụwa (40%) nke nwere oke oke ahịa na Europe na Eshia. Ọ bụghị naanị na Nokia na-arụ ọrụ ọfụma, ndị ọrụ ha yikarịrị ka ị ga-pịa na mgbasa ozi akwụ ụgwọ.
Site na Emeghị ihe infographic: Germany hụrụ ọnụọgụ 98.9% na Nokia, ihe karịrị 2% CTR na ihe karịrị $ 2.5 eCPM. Ndị ahụ bụ ọnụọgụ ndị mmepe Apple nwere ike naanị nrọ.
N’izu a, Nokia wepụtara ekwentị ha kacha ọhụrụ Windows Phone. Nke a nwere ike ọ gaghị eyi nnukwu ihe ma ọ bụrụ na ijikọ obere ihe… Nokia, Windows Phone, na Ihe ngosi Microsoft XBox 360. Ekwentị nwere nnukwu ike na ọfụma ezubere. XBox 360 nwere oke ahịa na ụlọ ọrụ egwuregwu. Na Windows ka nwere oke ahịa kenye na Enterprise. Ndị a bụ ahịa atọ dị iche iche ma baa ezigbo uru.
Dị ka enterprise ahịa adopts Windows Phone na Nokia ọnọde ngwaike mkpa… anyị na-aga ịhụ ụfọdụ na-adọrọ mmasị mgbanwe n'ahịa. Fọdụ mmetụ mara mma… igwe ndị a ji ụgbọ mmiri Nokia rụọ ọrụ, ọrụ egwu (ihe karịrị nde 14 ruo ụbọchị), Facebook, Twitter, njikọ LinkedIn yana yana lejend… Ngwọta igwe ojii nke Microsoft.